Afrika: Goob ay ku Dagaalaman Shiinaha, Mareykanka iyo Ruushka | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Jebriil Maxamed Domenico — December 9, 2019
Qaaradda Afrika waxay hore u ahayd goob ay ku dagaalaman shiinaha iyo mareynkanka se hadda waxay u egtahay in Ruushka uu ku soo biiray, aqoonyahanada badanaa waxay u arkaan saameeynta ruushka mid ka wanaagsan ree galbeedka, laakiinse marnaba hoos u-dhac aan ku keeyneynin xiisadaha loo qabo kheyraadka Qaaradda.
Saameynta Shiinaha iyo Mareynkanka
Tartanka ka dhaxeeyo labadaan wadan ayaa ah mid xawli ku socda, laakiin lama ogaan karo saadaaasha rasmiga iyo halka ay ku dhammaan doonto wakhtiga dhaw, wali wadamada Afrikaanka diyaar uma ahan inay gartaan qatarta gumeysiga ee kusoo wajahan dalalkooda.
Saamaynta Shiinaha uu ku leeyahay qaaradda Afrika waa mid caalamkoo dhan laga ogyahay, waxaana inta badan lagu gartaa maalgeshi ballaaran, Middana waxay muujineysaa xiisaha uu u qabo kheyraadka Afrika, dhanka kale waxaa muuqata in Shiinaha iyo Ruushka ay caqabad ku yihiin reer Galbeedka.
Arrintani waa mid dhibaato ku ah Washington maadaama Mareykanku uusan wali lahayn siyaasad istiraatiijiyadeed oo waxtar leh oo uga soo horjeedsan karo Moscow iyo Beijing.
Mareykanka wuxuu shaaciyey inuu xoogga saari doono ama saameeyntiisa qaarradda ay noqon doonto awood milatari, isaga oo marmarsiyo ka dhiganaya khatarta argagixisada ee sii kordheysa ee kooxaha xiriirka la leh ISIS ku hayaan qaaradda, balse talaabadan qallafsan ayaa dhab ahaan looga golleeyahay in lagaga hor tago saameynta sii kordheysa ee Beijing ku leedahay qaaradda.
Waxayna timid markii Donald Trump uu dagaal ganacsi lagalay Shiinaha isagoo ku tilmaamay dalkasi “isuduwaha lacagta(Currency Manipulator)” sidaasna uu khilaafkii usii kordhiyey. Shiinaha ayaa hada ka sarreeya Mareykanka markii la eego wadashaqeynta ganacsi ee ugu weyn uu la leeyahay qaarada Afrika – taasoo meesha ka saareysa in maamulka Trump xiisaddiisa siyaasadeed.
Labaatankii sano ee la soo dhaafay, ganacsiga Shiinaha ee Afrika wuxuu kordhay boqolkiiba 40, Shiinaha wuxuu si aan caadi ahayn ugu firfircoon yahay qaaradda Afrika, iyada oo booqashooyin heer sare ah, maalgashi kaabayaasha dhaqaalaha iyo ballanqaadyo waaweyn oo amaah deyn ah uu kawado qaaradda.
Awoodda Aasiya ee shiinaha ayaa si weyn u ballaarisay wadooyinka tareenka ee Afrika, iyagoo maalgaliyey mashaariic kala duwan oo laga fulinayo Kenya, Itoobiya, Jabuuti, Angola iyo Nigeria. Waxay hadda ka dhiseysaa angola warshad weyn oo biyo-abuuri ah, waxayna kaloo dhiseen waddo-tareenka ugu dheer Afrika ee isku xira Itoobiya iyo Jabuuti.
Si kastaba ha noqotee, iyada oo la tixgelinayo dhibaatooyinka Mareykanka uu isku mar kala kulmayo Ruushka, Shiinaha, Iran, Turkey, iyo kuwa kaleba, mareykanka ayaa loo badinayaa inuu kusii nagaan doono mustaqbalka meel kale oo aan ahayn qaaradda afrika.
Ruushka wuxuu bixiyaa ikhtiyaar ka duwan reer- galbeedka Dhanka dibloomaasiyadda, Laakiin Shiinaha ma gaari karaa?
Kadib dhammaadkii Dagaalkii Labaad ee Adduunka iyo sidii dagaalkii qaboobaa loo dejiyey, xiisaha Ruushka uu u qabo Afrika saro ayeey u kacday. Intii u dhaxeysay 1960 iyo 1984, iskaashiga u dhexeeya Ruushka iyo dhowr waddan oo Afrikaan ah wuxuu ku dhuftay ama kor u kacay 13 jeer marka loo eego dhanka ganacsiga.
Shirkii madaxda Afrika iyo Ruushka. Soomaaliya waxaa ugu qeyb galay madaxweyne Farmaajo oo matalaayo Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya
Midowgii Soofiyeeti wuxuu ka caawiyay dalal badan oo Afrikaan ah sidii ay oga hortagi ama isaga xorreyn lahaayeen saameynta Ingiriiska iyo Faransiiska iyo sidoo kale waxay tababareen dad ka kala yimid dalal kala duwan oo Afrikaan ah xagga sayniska iyo tikniyoolajiyadda.
Ruushka wuxuu kaloo ka caawiyay dhowr waddan oo Afrikaan ah sidii ay ku dhisan lahaayeen jaamacado, isagoo markaasna arday badan oo afrikaan ah deeq-waxbarasho siiyay.
Burburkii Midowgii Soofiyeeti ka dib, Ruushka ayaa isaga baxay gobolka.
Laakiin horraantii 2000,Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu bilaabay inuu muujiyo “xiiso xaddidan” ee ku aaddan qaaradda Afrika. Sannadkii 2014, markii Ruushku kaga yimaadeen xagga ree-Galbeedka cunaqabateynno taxane ah, waddanku wuxuu qaaday dhowr tillaabo oo uu ku kordhinayo saameynta uu ku leeyahay qaaradda.
Taasna waxaa caddeyn buuxda u ah Shirkii bishii oktoober ee sanaddkan oo Ruushka iyo Afrika ku dhexmaray ee magaalada Sochi, oo ahaa kii ugu horreeyay ee isku day Ruush ah oo Lagu xoojinayo xiriirka Afrika.
In kasta oo Ruushku ay qaaday dhowr talaabo geesinimo leh si saameeyn ay ugu yeelato qaaradda, hadana wali meel ugama dhowaan karto Shiinaha sababtoo ah Cabbirka ganacsiga Shiinaha ee Afrika wuxuu 10 jeer ka sarreeya ka Ruushka.
Shirkii Sochi, Ruushku wuxuu Heshiisyo gaadhaya $12.5 b la galay waddamo badan oo Afrikaan ah oo ku saleeysna xagga tamarta, hubka iyo wixii la mid ah. Kahor intuusan saxiixin heshiisyadan, Ruushku wuxuu qaaradda horey ula galay heshiiyso ah iibinta hubka, sida 2018kii heeshiskii ay masar ay uga iibsatay hubka militariga ee waaweeyn oo la filayo in 2023-da ay hesho masar, inkastoo ree galbeedka arrintasi walaac badan uu ka muujiyay.
Tartankan oo ka imanaya ilaha ugu weyn ee caalamka iyo raadinta xulafada juquraafi(Geopolitical Allies) ahaan waxay muujineysaa, qeybna ka tahay, dagaal ballaaran oo ka socda adduunka. Mareykanka wuxuu tartan kula jira Shiinaha iyo Russia, qaarada Afrikana tartiib tartiib ayey u noqoneysaa garroon ay ku tartamaan seddexdaas ciyaartoy.
Tags: Afrika: Goob ay ku Dagaalaman ShiinahaMareykanka iyo Ruushka
Next post Wax Ka Ogow Faa'idooyinka Laga Helo Mooska
Previous post Aanadii Negeeye – Qeybtii 20aad